Olee otú Idozi VLC anaghị akwado UNDF Format
Part 1: Gịnị bụ UNDF faịlụ Ọkpụkpọ?
Part 2: Gịnị VLC enye VLC anaghị akwado UNDF format njehie?
Part 3: Olee idozi VLC anaghị akwado UNDF Format?
UNDF File Format, bụ N'ezie, undefined faịlụ Ọkpụkpọ. Ọ pụtara na ihe ọkpụkpọ bụ enweghị ike na-akọwa usoro na-enweghị ike na-aghọta ya. Tumadi, ọ na-ahụwo na VLC ọkpụkpọ, mgbe anyị na-agbalị na-agba ọsọ faịlụ a na-adịghị kpamkpam ebudatara.
Isi ihe mere maka VLC anaghị akwado UNDF format njehie bụ ele mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ na-ezughị ezu download nke faịlụ, nke anyị na-agbalị na-agba ọsọ. The ọzọ mere nwere ike emerụ faịlụ na ọbụna ruru ụfọdụ esịtidem mbipụta n'ime faịlụ. Ndị na-abụghị nnweta nke kwesịrị ekwesị Koodu chọrọ na-egwu nchegbu faịlụ bụ otu n'ime ihe mere VLC idotke na-egwu faịlụ. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ, ebe ọbụna ma ọ bụrụ na faịlụ a bụ ziri ezi na akụkụ nile, chere ihu na otu mbipụta, na-egosipụta na ozi "Ọ dịghị adabara decoder modul: VLC anaghị akwado ọdịyo ma ọ bụ video format" undf ".Unfortunately, e nwere ọ dịghị ụzọ ka ị idozi nke a. "
Lee screenshot n'elu maka otu njehie ozi. N'ihi ya, na ọnọdụ, ma ọ bụrụ na i ji n'aka na gị faịlụ zuru okè na e nweghị ndị dị otú ahụ njehie, e nwere ike inwe ụfọdụ nzọụkwụ, nke e nwere ike iwere maka gwara ndị dị otú ahụ njehie VLC Player.
Nwere ike ikwu Product --- Download, Nyefee na jikwaa gị music n'ihi na gị iOS / Android Devices
Nkebi nke 3: Olee otú iji Idozi VLC anaghị akwado UNDF Format?
E nwere ụfọdụ nzọụkwụ a ga-agbaso maka kwesịrị ekwesị gwara nke nke na n'okpuru kwuru nzọụkwụ ga-gwara ndị 'VLC anaghị akwado UNDF Format' nke. Iji na-eme ya, i kwesịrị mbụ wụnye niile mkpa ọdịyo na video Koodu na usoro nke mere na ha na-kwesịrị ekwesị iji kwado niile faịlụ formats rụọ ọrụ nke ọma na usoro.
Ị nwere ike iji Jikọtara Community Codec Pack. Nke a jikọtara Community Codec Pack enye zuru ezu ndepụta nke nile dị oké mkpa audio ma ọ bụ video Koodu nke na-achọrọ na-egwu nta ọ bụla media faịlụ Ọkpụkpọ dị ugbu a.
Ị pụrụ ịhụ snapshots maka Jikọtara Community Codec Pack na-enweta enyemaka dị mkpa.
Ị nwere ike ibudata Jikọtara Community Codec Pack na-eme ndị needful dị ka hụrụ na screenshots.
Na a ụzọ, jikọtara Community Codec Pack bụ ihe dị mfe na ukwuu oru oma codec mkpọ, adabara nile di iche iche nke ọrụ. Ọ na-enye nkwado zuru ezu nke ọdịyo na video faịlụ na awade nnọọ mfe ngwọta nsogbu metụtara UNDF Format.
The ọzọ ngwọta bụ na i nwere ike na-agbalị ọhụrụ version nke VLC Player, nke ọtụtụ ugboro, rectifies njehie e gosiri na gara aga nsụgharị. Ya mere, tupu na-aga n'ihi na Jikọtara Community Codec Pack, anyị ndụmọdụ bụ ịgbalị ọhụrụ version nke VLC Player. Ebe a bụ ọhụrụ mbipute nke VLC Player snapshots.
Ị nwere ike ịga na ukara website http://www.videolan.org/vlc/index.html na-enweta ya site n'ebe ahụ.
Ngwọta on MP4 Video na-egwu na VLC Player
Olee otú iji VLC maka PS3?
Olee otú Play 3D Movies na VLC
> Resource> VLC> otú ndozi VLC anaghị akwado UNDF Format?